MacBooks cusub, macruufka 10 iyo in ka badan oo ku jira podcast-keena | Wararka IPhone
Podcast 7 × 06: Rose Gold maahan gabdhaha
Sida usbuuc walba, gudaha iPhone wararka podcast Waxaan kuu soo gudbineynaa wararkii ugu waaweynaa ee maalmahan ka dhacay dunida Apple. Qaybtan toddobaad ayaan ka hadlaynaa MacBook cusub oo la sii daayay toddobaadkan si lama filaan ah, taasina waxay ku darsameysaa hagaajinta gudaha iyo midab cusub oo, sidee si kale u noqon kartaa, waa Rose Gold. Oh, oo waxaanan iloobin ku saabsan WWDC 2016.
Waxaa jira wax ka yar laba bilood ilaa ay dhacdo shirkii horumarinta adduunka ee Apple, taas oo macnaheedu yahay muujinta waxa ku xigi doona nidaamka hawlgalka moobiilka ee shirkadda tufaaxa, sidaas darteed xanaaqyadu waxay bilaabaan inay kululaadaan. Waxaan sidoo kale uga hadlaynaa qaybtan oo ku saabsan fikradaha ugu fiican iyo waxa aan jeclaan lahayn inaan aragno oo lagu daray macruufka 10. Haddii aad ku raaxeysaneyso xilligan toddobaad ee podcast-keena, ha ka waaban inaad nala soo socodsiiso qiimeynta iTunes.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 7 × 06: Rose Gold maahan gabdhaha
Waan dhageysanayaa oo waan kala baxayaa.
Vodafone wax lacag ah kaa qaadi maayo markaad dhex mushaaxayso qiimaheeda midkood.
ApplePay ma timaaddo, maxaa yeelay Redsys waa inay isku dhejiso taleefannada xogta, taas oo ku kacaysa lacag, bangiyada iyo Apple-ba labaduba midba dhinac ayuu eegayaa, foorida, maxaa yeelay cidina ma rabto inay bixiso biilka.
Iyo bixinta NFC oo ka yar € 20, haddii ay khatar tahay, dhibna kuma lahan haddii aad joogto Madrid, London ama Faransiiska Guyana. Haddii qof uu jeebkiisa ku sito taleefan xog ah oo bilaa wireless ah (iyo batari ku shaqeeya) oo uu ku dhex socdo dad badan oo tuurinaya lacag ka yar € 20, waa in lacag la siiyaa. Haddii taleefanka xogguhu uu ka yimid "meherad" ku taal Panama, in yar marka la yiraahdo, oo eedeymaha lagu soo oogay Moscow, waxaan ku arkaa inay adag tahay in waxyaabaha si dhaqsi leh u socdaan si lacag bixinta loo xannibo ka hor intaan la waayin. Waana hore u dhacday.
In touchID uusan ku shaqeyn farta qoyan (ama silikoon, ama bur ...) waa howl wanaagsan, hadii ay ahaan laheyd mid aad u jilicsan sidii loogu shaqeyn lahaa faro ka sii yar ama ka yar oo la mid ah, ganacsi xun. Haddii farta ay nadiif tahay (ma ahan mid qalalan, oo aan sidoo kale ku furo mararka qaarkood iyada oo qoyan, aan qoyan) waxay ku dhacdaa 1 ka mid 1000kii jeerba.
Intaa waxaa dheer, in yar oo qaybo ah ayaa ku dhowaad aan la maqli karin maxaa yeelay mid ka mid ah qaybaha ayaa leh xoog wax ku muquunin.
Sikastaba, waxaan filayay xukun yar.
Jawaab Norbert Addams
Sida laga soo xigtay Wozniak Apple waa inay bixisaa canshuur badan
IPhone 7 waxaa laga yaabaa inuu leeyahay badhanka guriga ee cadaadiska xasaasiga ah